【AMAKHODI GENSHIN IMPACT 】 Ibuyekezwe NAMUHLA ▷ Julayi 2022
Amakhodi we Genshin Impact
Sawubona Mzingeli! Njengoba ufuna i amakhodi emiklomelo futhi maduze amagugu angene Genshin Impact lapha ngizokushiyela uhlu oluhluke kakhulu lwalezi, khumbula ukuthi ezinye zingaphelelwa yisikhathi, zihlenge ngokushesha kanti ezinye zivumelekile ngokuya ngesifunda, ngincoma ukuthi uzizame zonke, ngoba siqinisekile ukuthi u-80% walokhu Uhlu lwamakhodi Luhlala Lusebenza . Ungakhohlwa ukuthi uyabona iziqondiso, imephu exhumana, izinto, amasimbali, i-armas, abalingiswa, izitha, ohambweni, izinto zobuciko, curiosities nokunye mayelana genshin impact kuwebhu
Uhlu Lwamakhodi Asebenzayo we Genshin Impact
GENSHINI-GIFT: Ama-Protogems angu-50 nama-hero wits angu-3.
I-SBNBUK67M37Z: Ama-Protogems angu-30 nezinto ezingu-5 zamahhala ze-EXP (ivumeleke kubadlali abasha kanye kuphela).
I-MS7C3SV8DMZH: Ama-Protogem angu-60 amahhala kanye Nokuhlangenwe nakho Kwezihambeli ezingu-5 (ikhodi etholwe ngoMashi 29, isasebenza).
AB7CKBVQULE5: Uthola ama-Protogem angu-100 amahhala kanye namaminerali ayi-mystical refinement (asebenza kuze kube umhla ka-10 Mashi kuphela).
I-LBNDKG8XDTND: Uthola ama-Protogem amahhala angu-100 kanye ne-mystical refinement ore (isebenza kuze kube umhla ka-10 Okthoba 4)genshin1006u - uthola ama-protogem angama-30 + i-Adventure EXP eyi-15 yamahhala (isebenza eYurophu kuphela).
genshin1006a - uthola ama-protogem angama-30 + 15 Adventure EXP mahhala (isebenza eMelika kuphela).
genshin1006s - Uthola ama-Protogems angu-30 + 15 Adventure EXP mahhala (isebenza e-Asia kuphela).
GenshinMHY0O - uthola ama-protogem angama-30 mahhala (asebenza eYurophu kuphela).
GenshinI-MHY0M - uthola ama-protogem angama-30 mahhala (asebenza eMelika kuphela).
GenshinMHY0I - uthola ama-protogem angama-30 mahhala (asebenza e-Asia kuphela).
GENSHINMHY0O - uthola ama-protogem angama-30 mahhala (asebenza kuphela kwi-PC neselula).
GenshinZHB30 - uthola ama-protogem angu-160 mahhala.
Genshin0928N - uthola ama-protogem angama-60 namajikijolo ayi-10.000 mahhala (asebenza kumaseva aseMelika kuphela).
Genshin0928E - uthola ama-protogem angama-60 namajikijolo ayi-10.000 mahhala (asebenza kumaseva aseYurophu kuphela).
Genshin0928A - Uthola ama-protogem angama-60 namajikijolo ayi-10.000 mahhala (avumeleke kumaseva ase-Asia kuphela).
GENSHIN1111 - uthola ama-protogem angama-60 namajikijolo ayi-10.000 mahhala (avumeleke kuwo wonke umuntu).
GENSHINI-GIFT - uthola ama-protogem angama-50 nezinto ezi-5 zesipiliyoni sabalingiswa bakho mahhala.
GENSHIN1006A - Uthola ama-protogem angama-30 namaphakethe wesipiliyoni angu-5 mahhala (avumeleke kuphela kumaseva aseMelika).
GENSHIN1006U - uthola ama-protogem angu-30 namaphakethe wesipiliyoni angu-5 mahhala (avumeleke kuphela kumaseva aseYurophu).
GENSHIN1006S - Uthola ama-protogem angama-30 namaphakethe wesipiliyoni angu-5 mahhala (avumeleke kumaseva ase-Asia kuphela).
I-GOLNXLAKC58 - uthola ama-protogem angama-50 mahhala (asebenza kuze kube nguNovemba 30, kuzo zonke izifunda namadivayisi).
Okufanayo56 - uthola ama-protogem angama-100 namajikijolo ayi-50.000 mahhala (avumeleke kuwo wonke umuntu).
nBEm3myAL2b - uthola ama-protogem angama-100 namajikijolo ayi-50.000 mahhala (avumeleke kuwo wonke umuntu).
I-G3tQq6TOqmE - uthola ama-protogem angama-100 namajikijolo ayi-50.000 mahhala (avumeleke kuwo wonke umuntu).
5KVeIbSxDUU - uthola ama-Protogems ayi-100 kanye ne-10 Mystic Boost Minerals mahhala (isebenza kuwo wonke umuntu).
jsSK8n23jzR - uthola ama-Protogems ayi-100, amaminerali ayi-10 amahhala okuqinisa angaqondakali (asebenza kuwo wonke umuntu).
153YUSAENH - uthola ama-Protogems angu-30 nezinto ze-Adventurer ezingu-5 mahhala (zisebenza kuwo wonke umuntu).
I-dU2mhjQL1ZT - uthola ama-protogem ayi-100 nezinto ezi-5 zamahhala ze-EXP (zisebenza kuwo wonke umuntu).
I-GSIMPTQ125 - Uthola ama-Protogems angu-140, ama-Blackberry angu-10.000, izinto ezi-5 ze-ExP ye-Adventurer, nezinto ezi-3 zeQhawe Lobuhlakani.
153YUSAENH - Uthola ama-Protogems angu-140, ama-Blackberry angu-10.000, izinto ezi-5 ze-ExP ye-Adventurer, nezinto ezi-3 zeQhawe Lobuhlakani.
GENSHINI-GIFT - Uthola ama-Protogems angu-140, ama-Blackberry angu-10.000, izinto ezi-5 ze-ExP ye-Adventurer, nezinto ezi-3 zeQhawe Lobuhlakani.
GENSHINI-GIFT - Ama-Protogems angama-50 kanye nama-hero wits ama-3 wamahhala.
I-GSIMPTQ125 – 60 Protogems kanye 10.000 amajikijolo mahhala.
153YUSAENH - Ama-Protogems angama-30 kanye Nokuhlangenwe nakho Kwezihambeli ezi-5 mahhala.
I-KTNSCQWW922M - Ama-Protogems ayi-100 kanye nezinto eziyi-10 zamahhala zokucwenga ezingaqondakali.
I-ET7ADQFF8KJR - Ama-Protogems ayi-100 kanye Nobuhlakani Bamaqhawe obu-5.
I-PSNTC8FEQK4D – 100 Protogems kanye 50.000 khulula Mora.
I-GS6ACJ775KNV – 60 Protogems kanye 10.000 khulula Blackberry.
Idatha ye-TT7BVJNPL249 - Ama-Protogem amahhala angama-60.
UMNTUHPP53QH - Ama-Protogems amahhala ayi-100 namajikijolo angama-50.000.
I-CBNXRD6S7H3N - Ama-Protogemas ayi-100 namajikijolo angama-50.000 (asebenza esifundeni saseChina kuphela).
I-4BNSD3675J8D - I-Protogems yamahhala eyi-100 kanye ne-5 hero wits.
EBPWQU6SNZ22 - Ama-Protogems angu-100 nama-hero wits angu-5 (asebenza esifundeni sase-China kuphela).
FS6SU367M279 - Ama-Protogem amahhala ayi-100 nezinto zokucwenga eziyi-10.
2T7E9CPA7YJE - Ama-Protogems angu-100 wamahhala nezinto zokucwenga eziyi-10 (zisebenza esifundeni sase-China kuphela).
I-WTNTBYSZJNRD: Ama-Protogems angu-100 wamahhala kanye ne-ore yokucwenga x10.
8A6ABTH2N9Z: Ama-Protogems angu-100 amahhala kanye ne-hero's wit x5.
UTNBBGSZ3NQM: Ama-Protogems angu-100 namajikijolo angu-50.000.
© 2022 Amakhodi Genshin · Wonke Amalungelo Agodliwe